विवाह भएको एक हप्ता नपुग्दै अर्को काण्डमा फसिन् प्रियंका ! - E ALL NEPAL
विवाह भएको एक हप्ता नपुग्दै अर्को काण्डमा फसिन् प्रियंका !
चर्चा नै चर्चाको शिखरमा पुगेकी प्रियंको विवाहमा थपियो फेरी अर्को ट्रोल काण्ड
काठमाडौ । बलिउडकी अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र हलिउड स्टार निक जोनसको विवाह भएको केही दिन नबित्दै उनीहरुको विवाहको हरेक पक्षको प्रशंसा र आलोचना गदै हरेक दिन चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् ।
उनीहरुले विवाह जोधपुरको उम्मेद भवनमा क्रिस्चियन रिति रिवाजअनुसार १ डिसेम्बरमा र हिन्दू रिवाज अनुसार २ डिसेम्बरमा विवाह गरेका थिए । विवाहमा निकै लामो सेतो गाउनमा लगाएर दुलही बनेकी प्रियंकाले निकलाई आई डु भनिन । त्यसपछि त्यहा एकछिनको माहोल नै परिवर्तन भएको थियो ।
त्यसपछि प्रियंकाले एउटा भिडियो सेयर गरेकी छिन् ।जसमा उनको श्रीमान् निकले बेहुलीको रुपमा सजिएर आउँदै गरेकी प्रियंकालाई देखेर आँखा रसाएर आसु झरेको र पुछेको कुरा पनि चर्चाको उचाइमा पुगेको थियो । जुन भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । त्यस्तै प्रियंकाको ब्राइडल गाउन राल्फ लरेनले डिजाइन गरेका थिए भने त्यस ब्राइडल गाउन तयार पार्न मात्रै एक हजार आठ सय २६ घण्टा लागेको थियो ।
सोही कुरालाई लिएर यति धेरै चर्चा भइरहेका बेलामा फेरी विवाहको आतिशबाजीको विषयलाई लिएर प्रियंका यति बेला ट्रोलको पात्र बनेकी छिन् । जसमा उनले ७५ फिट लामो गाउन लगाएको कुरालाई ट्रोलको मुख्य सामग्री बनाइएको छ । जसले अहिले उनको विवाहको तस्विर तथा अन्य सामग्रीहरु सामाजिक संजालमा ट्रोल भैरहेको छ । हेरौ
त्यसैगरी भर्खरै मात्र उनीहरुको रिसेप्सन पार्टीको कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत उपस्थित भएर बधाई दिएको कुराले पनि हगंमा नै मच्चाएको थियो । जुन कार्यक्रममा अन्य चर्चित कलाकारहरु पनि आएका थिए । सोही कारण ट्रोल बनेकी प्रियंकाको अहिले ब्यापक चर्चा भएको छ ।
परदेशबाट गरिन् यस्तो विन्ती छ सेयर गर्दिनु पिल्ज 🙏आज अन्तिम दिन हो ।।
‘छोरा म निको भएर फर्किन्छु’ भनेकी सुमितकी आमा कहिल्यै फर्किनन, रोयो नेपाल आइडल !